FAQ - Changzhou Plet Ukuphrinta Technology CO, .LTD
KUNGANI UKHETHA IPLET
Umkhakha we-Photovoltaic squeegee
Isikrini se-Touch squeegee
Ukuphrinta kwesikrini kwendabuko
Isendlalelo sesangweji lesithathu
Imboni ye-Microelectronics squeegee
I-squeegee eyenziwe ngokwezifiso
Okuzenzakalelayo squeegee grinder
Umhloli webhalansi we-Squeegee
Squeegee onqenqemeni polisher
Kwenziwe ngentando bushelelezi lwemidlalo
Kwenziwe ngentando uyinki buyisela bushelelezi
indawo yokubeka eshibhile
iraba ubulukhuni umhloli
Umkhiqizo waseJapan Bando
Uhlobo lwe-Bando B squeegee
Uhlobo lwe-Bando P-squeegee
Uhlobo lwe-Bando S-squeegee
Yiziphi izinhlobo ezinkulu SPS squeegee?
SPS squeegee libhekwa ngezigaba ezintathu eziyinhloko: 1. Traditional M-uhlobo squeegee (ngaphandle ukwesekwa ipuleti). 2, FGB fiberglass nokususa. 3, NJENGOBA sohlangothi olulodwa carbon fibre nokususa sezinsini.
Kukhona onobuhle eziningana irabha ingxenye SPS squeegee?
Kukhona okwamanje onobuhle ababili, omunye iyona M-uhlobo iraba asetshenziswe M-uhlobo FGB fiberglass panel, kanti omunye irabha PLUS asetshenziswe fibre NJENGOBA-carbon (conductive, kuphela-livikela kakhulu, nokuningi wear- ukumelana).
Yiziphi ubukhulu ezibekiweko of the M uhlobo nokususa glue?
M onobuhle babe 9 * 50, 9 * 30, 7 * 40, 5 * 25, 5 * 20 ithiphu ukujiya ngokuvumelana ukujiya, futhi kungenziwa egcizelele ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende.
Yiziphi izilinganiso FGB fiberglass bushelelezi?
I bendabuko yokunyathelisa sesikrini FGB fiberglass nokususa ezibekiweko 9 * 50, ubude ukusika ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende. Kungenziwa egcizelele ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende.
Yiziphi izilinganiso NJENGOBA carbon fibre squeegee?
I bendabuko sesikrini ukuphrinta umkhakha NJENGOBA carbon fibre nokususa Ukucaciswa 7 * 50, ubude ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende. Kungenziwa egcizelele ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende.
Kuyini ifayela format futhi ngokwezifiso isikhathi adingekayo amasevisi siko?
3D: STP, XT; CAD: 2000 version, isikhathi ngokwezifiso: zingakapheli izinsuku ezi-5
Izinhlobo ezintathu bushelelezi kungenziwa kutsho. M imodeli futhi FGB imodeli esiphezulu olulodwa ukugaya imali 0.5mm (200 anezikhala ukugaya isondo). NJENGOBA carbon fibre nokususa olulodwa esiphezulu ukugaya imali 0.1mm (anezikhala 200 ukugaya isondo, carbon fibre ibhodi kungaba futhi phansi). I squeegee eliye lasetshenziswa up nje eqhukethe ngaphakathi kuphela. Nobulukhuni onqenqemeni ummese iphansi kakhulu ukuba kutsho ngokushesha. Kuthatha amahora angu-24 kuphela ngaphambi ukugaya.
Indlela ukufaka FGB fiberglass bushelelezi futhi NJENGOBA carbon fibre bushelelezi ku zalapho ezivamile?
Kokubili FGB fiberglass bushelelezi futhi NJENGOBA carbon fibre bushelelezi kukhona 1.2mm obukhulu. Bona ingafakwa nge pad 8mm obukhulu, okuyinto singahlinzeka.
Ukugcina SPS Squeegee?
Ikheli: isikhungo 21A, QingyangRoad NO.1 ， Idolobha laseChangzhou, Isifundazwe saseJiangsu, neChina
Ucingo: +86 18015055391